Ndangcwatywa njani nguDigg (Ityala lam) | Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 4, 2007 NgeCawa, ngoMatshi 4, 2007 Douglas Karr
Kwabo bafunda ibhlog yam rhoqo, uyazi ukuba ndiyazama ... kakhulu! Mhlawumbi kakhulu! Ekuqaleni kwale veki Ndisayine uMthumeli woMsebenzisi. Yinkonzo echongwe kwifayile ye- Inqaku lakutshanje elinentambo apho umbhali wenqaku ahlawule khona ukufumana iiDiggs on Digg.com.
Nantsi indlela esebenza ngayo ... umntu ahlawule uMthumeli woMsebenzisi kwaye bahlule imali ngabasebenzisi beDigg, abathi bona, bembe ibali. Inkqubo inyani ngokwenene ukukuxelela inyani. Ufumana i-URL yokondla yesiko ekuxelela ukuba ngawaphi amabali kwiDigg. Wena ngoko digg ibali. Kuya kufuneka ungene kwakhona kwi-Submitter yoMsebenzisi ukuxela dugg ibali. Emva koko, eyakho digg iqinisekisiwe. Andazi ukuba yenziwe ngantoni, kodwa ayizenzekeli.
Ndicinga ukuba abaqhubi be-Submitter yoMsebenzisi kufuneka balumke malunga nendlela abayihamba ngayo ishishini labo. Ukuba bahlala bekhuhla iDigg ngomxholo, ndiqinisekile ukuba iDigg iya kuba kubo ngokukhawuleza. Ukuba ungumsebenzisi woMthumeli womsebenzisi, ndingangqina ukuba zikwizinto ezikhawulezayo kuwe!
Umsebenzi wam noMthumeli woMsebenzisi ngokusemthethweni namhlanje. Ndifumene lo myalezo ulandelayo xa ndizama ukungena kwiDigg.com:
Kwaye ibiyintoni umvuzo wam omkhulu?
Ndineentloni zokuvuma ukuba ndenze i $ 0.50 enkulu ngaphambi kokuba ndingcwatywe nguDigg. Ngokwenyani, andenzanga nto kuba kusenokwenzeka ukuba andinandlela yokuqokelela i $ 0.50 kuMthumeli woMsebenzisi.
Ke ndifunde ntoni? Ngaba i-Digg ingaxhatshazwa? Ngokuqinisekileyo, kodwa bona are ukubukela kunye nokuphucula ukukwazi kwabo ukuthintela le micimbi. Ngaba ukhathalelo loMthumeli womsebenzisi? Ndiyathekelela ukuba mhlawumbi bafumana iiDiggers zilahlwe ngasekhohlo nasekunene… kwaye bemka benentwana yeminti. Emva kokuzama ukuThumela uMsebenzisi, ingcebiso yam iya kuba yile hlalela kude. Yintlungu kwi-butt, inkcitho yexesha kwaye ayikufanelanga iisenti onokuthi uzuze okanye ungafumani.
Ngokukodwa ukuba uyayithanda iDigg. Andinguye umlandeli omkhulu, kodwa ndicela uxolo ngokuba ndifumene isihlangu.
Uxolo Digg! Uxolo uKevin, u-Owen, uNicole, uBrian, uSteve, u-Amar, uDan, uDaniel, u-Eli, uJay, uJohn, uMike, uRon, uScott, kunye noTimeless!
Mar 4, 2007 ngo 6:39 PM
Mhlawumbi unganyoba umqolo wakho ngesiqingatha semali oyenzileyo ..
yima awuzange uyifumane vele .. damn man .. ngoku kubuhlungu lol
Mar 4, 2007 ngo 7:10 PM
Ndingakuvuyela ukuhlawula iisenti ezingama-50 kwizipho ezithandwa nguDigg!